Safal Khabar - स्वास्थ्य जोखिम बढेपछि अमेरिकामा ई–चुरोट उत्पादनमा प्रतिबन्ध
बिहिबार, २६ भदौ २०७६, १८ : ३४
- इसाम अहमद
अमेरिकी बजारमा प्रमुख ई–चुरोट उत्पादक कम्पनी जूलले गरिरहेको विज्ञापनप्रति पनि सर्वत्र आक्रोश व्यक्त गरिएको छ । जूलले सूर्तिसेवन भन्दा ई–चुरोट हानिकारक नरहेको जिकिर गर्दै विज्ञापन गरेको थियो । (रासस-एएफपी)
१. मलेसियाले ११ वर्षपछि नेपाललाई हरायो
२. बालिका काण्डमा मुख्यमन्त्री राईले भने– फसाउन अनेक षडयन्त्र भयो
३. भ्रमण वर्ष २०२० संकटमा : विदेशका सबै प्रचारप्रसार कार्यक्रम रद्द
४. विश्वका ५६ देशमा कोरोनाको कहर
५. रेल र बस एक आपसमा ठोक्किँदा तीस जनाको मृत्यु
६. सन्दीप लामिछाने एक सय विकेट पूरा गर्ने पहिलो नेपाली
७. काठमाडौँको मुहार फेरिँदै, १०० दिनमा ९ हजार ५०० खाल्डाखुल्डी पुरियो
८. परिमार्जन नभइ एमसिसी पारित हुन्न : अध्यक्ष प्रचण्ड
९. संविधान संशोधन पार्टीको होइन, बामदेवको चाहना : प्रचण्ड